Ngaba Unomdla Wokutsalwa Kwexesha? Iziphumo Ziyimali Eninzi Yomoto Wakho Osetyenzisiweyo
Kunzima ukuthatha isithombe esibi se-Lamborghini Huracan ka-2015. (c) uKeith Griffin nge-About.com
Sonke sibonele: iifoto ezimbi zokuthengisa imoto esetyenziswayo. Kulula kakhulu ukuthatha iifoto ezimnandi ngokucwangcisa nje. Akudingeki ukuba ube yingcali yezithombe.
Kutheni uzikhathaze ngeefoto ezimnandi zeemoto ezisetyenziswayo? Ziyimbono yokuqala oya kuyenza kwilizwe elibandayo ledijithali. Iifoto ezilungileyo ziza kwenza abantu baqhowule kwisibhengezo sakho kungakhathaliseki ukuba nexabiso. Izikhangiso kunye neefoto ezimbi ziza kucofa kuphela xa ixabiso lihle kakhulu.
Enyanisweni, ukuba ungathathi ixesha lokuthatha iifoto ezilungileyo, uza kufumana imali encinane kwimoto yakho esetyenziswayo. Ngaba ufuna ngokwenene imali ephakamileyo lakho? Imali engaphantsi omele uyichithe kwimoto yakho elandelayo esetyenziswayo.
Hlola ixesha losuku
Ukukhanya kwelanga kunye nezithunzi ezisebusuku zelanga zenza isithombe esifanelekileyo. (c) uKeith Griffin nge-About.com
Ukukhanya kwelanga kuyinto enhle, ngaphandle kokuba uthatha iifoto zemoto. Emva koko ilanga lemini liza kuhlamba ukukhanya kweemoto. Iifoto ziya kuba nzima kakhulu. Ukubheja kwakho okulungileyo kukuba ukudubula mhlawumbi isigama seyure emva kokuphuma kwelanga okanye mhlawumbi iyure ngaphambi kokushona kwelanga. Ukukhanya akunamandla kwaye imibala iya kukhangela.
Ukudubula kwiiLots of Angles
U-Hyundai Sonata u-2011 wadubula kwi-angle yangaphambili ye-3/4. (c) i-Hyundai Motors yaseMelika
Ukudubula kakhulu kwimizuzu yonke yemoto onokuyenza. Thatha iifoto ngqo, ukusuka kwicala, uze uvela kwinqanaba ngalinye lemoto. Ukuthengisa isetyenzisi esetyenzisiweyo ? Shoot kusuka phezulu ukuze abathengi babone kwibhedi yepop. Ngaba ufuna i-injini shots? Yithatha kuphela ukuba injini ihlambulukile okanye inokungaqhelekanga. Ngaphandle koko, injini iyinjini kwaye inzima ukubenza babekhetheke kwizithombe.
Njalo thabatha i-Photo Test
I-Toyota 4Runner iyimoto ekhangelekayo de ibe idutshulwa embi. (c) uKeith Griffin nge-About.com
Kwiintsuku ezindala zefilimu, abayili bezithuthi basebenzisa iifoto ze-Polaroid zenzeke ngokukhawuleza. Yenza into efanayo neefoto zakho zedijithali. Thatha isithombe, uze ume kwaye empeleni ujonge kuyo. Khangela izinto ezichazwe kweli nqaku. Ziziphi izithunzi? Ingaphakathi lixubile?
Cinga le ngcebiso eyongezelelweyo: vula isondo ukuze ivili zithuthi zibonakala kumfanekiso wakho. Kulo mfanekiso ungasentla iivili zijika ngokuchanekileyo kodwa imoto inesithunzi esicacileyo. Isinyathelo esilandelayo sichaza ukuba kutheni ingxaki.
Jonga i Shadows
Isithunzi esingafanelekanga senza umfanekiso ombi. (c) uKeith Griffin nge-About.com
Kulungile, ngoko akusikho umfanekiso wesithuthi esetyenziswayo. Yiyo entsha 2017 Chrysler Pacifica. Ndathabatha idlwengulo yomnye epakishwe kwinqwelo ekhethekileyo. Kukho umgca othungayo othungayo isithuthi. Kwakhona isithoso esibi sephambili. Musa ukwenza iphutha lokuvumela ukuba isithunzi sakho sibonakale emfanekisweni.
Thatha inyathelo (okanye 2) kufuphi
Thatha isinyathelo okanye 2 ngokusondela xa ufotoza imoto. Iyanciphisa i-clutter engasimfuneko. (c) uKeith Griffin nge-About.com
Ngokuqinisekileyo, ufuna ukufumana yonke imoto esithombeni. Kodwa udinga abantu ukuba bakwazi ukubona iinkcukacha zemoto yakho esetyenziswayo. Gcwalisa isakhelo ngemoto yakho esetyenziswayo. Okanye, sebenzisa ubuncinane isofthiwe yokuhlela isithombe esisiseko ukuze ukhiphe isithunzi kufutshane xa ixesha lifika lokulifakela. Nazi izixhobo ezifanelekileyo ze-software zokuhlela isithombe se-Windows. Ukuba ungumntu we-Mac, khangela ezi zikhethi ze-photo ze-software ze-Mac.
Njengoko unokubona, kwisithombe esixoxweyo imoto "i-pops" ngaphezu kokuba ihleli ngqonge.
Gxininisa kwi-Cool Elements
Ingaphakathi ye-BMW Mini Clubman kunye nobuchwepheshe bayo bokugcina ukugcinwa kwekhompyutha. (c) uKeith Griffin nge-About.com
Umfanekiso olapha ngentla uvela kwinkqubo yokulumkisa yokugcinwa kwe-Mini Clubman. Ndandifumene kakhulu ndathabatha umfanekiso wezibane ezikhanyayo njengoko usondela kwisithintelo esilandelayo. Ngubani omele abone ukuba yintoni na emva koko izibane zenza umsebenzi omkhulu kangaka?
Kuya kuba nzima kum ukuchaza ngamagama indlela oku kusebenza ngayo le nto. Sekunjalo, umfanekiso olula kule meko ufanelekile ngamazwi angamawaka. Ngokugxininisa ngokubhekiselele kwi-feature, ungabonisa umthengi onokuthi upholile njani ubugcisa.
I-Ugh - i-clutter ifake imoto esetyenzisiweyo yokuthengisa ifoto yiphutha elikhulu. (c) uKeith Griffin nge-About.com
Usenokumangaliswa ukuba bangaphi abantu abaza kuthunyelwa ngeentengiso zeemoto kunye nezithombe zendawo yangcolileyo. Ngaba unokucinga? Ucela nje ibhidi ephantsi kwebhola yakho njengomnini wale Dodge Neon . Abathengi abanokuthi baya kubakhokela ngokuthe ngqo umrhumo wakho-kwaye ngubani na onokumangalela? Ukuba awukhathalele ngokwaneleyo ukunyamekela ingaphakathi, ngokuqinisekileyo awukhathaleli izinto zangaphandle okanye iinkqubo. Mhlawumbi ukhona, kodwa akunakwenzeka.
I-Mercedes-AMG S65 Cabriolet. (c) iMercedes-Benz
Umhlobo wam ungumqeqeshi wezithuthi zemoto. Udubule iifoto zeemoto iminyaka emashumi. Wazama ukuthengisa i-Mercedes yakhe kwi-intanethi kwaye akafumanekanga iibhobho, nangona ixabiso lilingene. Intombi yakhe, iphumelele kodwa kungabi ngumbono wezithombe zobungcali, ithatha iifoto kunye nabantu baqala ukuphendula.
Ukuziphatha kweli bali? Abathengi bakrokrela iifoto zobungcali bezakhono kuba zivame ukuthetha iifoto azikho imoto yangempela.
Fumana i-Sticker Sticker!
Isitika se window ye-Mazda5 ka-2008. Ngekhampani KBB.com
Kulungile, ngoko akusikho isicatshulwa sezithombe kangangoko kunengqondo nje yesiqhelo. Thatha ixesha lokuya kwiwebhsayithi kwaye wenze isitika sewindow yakho kwimoto. Eyona ingezantsi yam Mazda Mazda5 ka-2008 . Isimboli sefestile siza kuba nenombolo yomnxeba kodwa, akukho cala, ndishiye loo nkcukacha!
Ngesitifiketi sewindow ye KBB.com, unokwazi ukwabelana ngayo nge-media media, into ebalulekileyo yokuthinta.
Ukuqonda Iimoto eziQeziwe zangaphambili
Ukuthelekiswa kweNtloko noNdlunkulu: 2008 uSeshby GT500 Mustang no-2008 Challenger SRT8
Iingoma ezi-50 eziphambili zeHlabathi zeHlabathi ze-90s
Ibiscuits for Brains
IGibe, iJibe, neJive
Imimangaliso kaYesu: I-Exorcism ye-Boy-Possessed Boy
Idioms kunye neenkcazo ngokusebenza